सम्मान दिएर झन् जिम्मेवारी थपिदिए | अन्तरवार्ता | साझामन्च
सम्मान दिएर झन् जिम्मेवारी थपिदिए
अनलाइनबाट, प्रकाशित मिति : २०७३ ,माघ , १९ 10:53:19
भारत सरकारद्वारा पद्मश्री सम्मान प्राप्त गरेकी माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइराला भन्छिन्, “सम्मानले कानून कार्वान्यनमा दबाव दिन नैतिक बल दिएको छ ।”
भारत सरकारबाट यो सम्मान पाउने पहिलो विदेशी तपाई हुनुभयो । यसका खास कारणहरु छन् ?
अरु खास कारण छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । उनीहरुले सामाजिक कामको लागि दिएका हुन् । भारतले हाम्रो काम हेरेर बसेको थियो होला, अहिले त्यसको मुल्याङ्कन गरेर घोषणा गरे जस्तो लाग्छ ।
भारत सरकारबाट पनि सम्मान पाउने अनुमान थियो ?
सम्मान पाउने कुनै अनुमान गरेकी थिइन र मैले आफ्नो काम सम्मान पाउनका लागि गरेको पनि होइन । काम गर्दा सम्मान पाएकोमा भने निकै खुशी छु ।
चेलीबेटीको संरक्षण बाहेक अरु के काममा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धको अभियान र बेचबिखनमा परेकाहरुको संरक्षणमै म लागिरहेकी छु ।
भनेपछि, भारत सरकारले चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको संकेत हो, यो ?
चेलीबेटी बेचबिखन नेपाल र भारत दुवै देशको समस्या हो । लामो समयदेखि चेलिबेटी बेचबिखन विरुद्ध काम गरेको हुनाले पद्मश्रीको लागि पहिलो विदेशीमा मलाई रोजियो । जुन–जुन कारणले छानेको भए पनि ममाथि जिम्मेवारी थपिदिएका छन् ।
थपिएको जिम्मेवारीलाई कसरी पूरा गर्नुहुन्छ त ?
म एक्लैले गर्ने होइन, यो दुवै देशले गर्नुपर्ने काम हो । म त त्यसको एउटा अभियानकर्ता मात्र हुँ । दुई देशले नै चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध बनाएका नीतिले काम गर्ने हो । नेपाल र भारतमा चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध बनाईएका विभिन्न आयोग र कानूनहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । यो सम्मानले कार्यान्वयनमा दबाव दिन नैतिक बल प्रदान गरेको छ ।